KingMarayu: April 2009
အနာဂတ် ရောင်ခြည်( Future Ray)
ဖဖူးရောင် အာရီယန် နိဂုံး
အော် သင်္ကြန် သင်္ကြန်
....လကြောင်း ထောင်း ဂျောင်း ..............
ငရို.ရင်ထဲ ထိုးထည့် ..........။
Posted by KingMarayu at 12:240comments
အမျိုးမျိုး ပီးလို. ......................။
အာရီယန် အလုပ်ကို လုပ်.........။
ထိုလူကို နှသီးနန်. ဆိတ်
ဒေလူကို နှသီး နန်.ထိုး ...............။
လူရပ်၊ လူဌာနီ မှာ
သီကျ လီကတ်ယင့် ..................။
Posted by KingMarayu at 14:330comments
နင့်ကို ချစ်ဝံ့ရေ သတ္တိ
ငါ့မှာ ဟိရေ ...................။
Posted by KingMarayu at 20:520comments
Posted by KingMarayu at 20:500comments
ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာ ကိုယ့်မြီ ကိုယ့်ရခိုင်မြီ နန်.၀ီးလာရစွာလေ့ ကကောင်းကြာဗျယ်မလားဂု။ဒေတန်းခူးလ ရောက်ယာဆိုကေ ငရို.ရွာလယ်က စံပယ်ပင် မှာ သင်္ကြန်ပွင့်တိ ပွင့်လို.ဟိလီဖို.။ ရွာက လူပျိုချေတိ ဆိုကေ အပြုံးကိုယ်စီနန်.။အကွက်ကိုချောင်းနိန်ကတ်စွာ။ အယင်ခါဆိုကေ အကွက်ချောင်းစွာမှာ ငါလေ့ပါရေ။ငါ အဂု လန်ဒန် ကိုရောက်နိန်ရေ။ လန်ဒန် ကို စကော့တလန်ကနိန် ဆင်းလာစွာ ငါအကြောင်းဟိရေ။ သင်္ကြန်ဆိုရေ အငွိအသက်ချေတိကိုငါခံစားချင်လို.။ ဒေကိုရောက်ခိုက်ငါရခိုင်ကိုဖုန်းဆက်စွာ။ စကော့တလန်က ရခိုင်ဖုန်းဆက်ရစွာမလွယ် တခြားဂြိုလ်တစ်ခုကိုဆက်ရေပိုင်။ ခြစ်တတ်ခြစ်တတ် နန်.။ လူကြီးမင်း ဆိုရေလူနန်.လေ့ ရက်ပြတ် ရက်ပြတ်တွိရေ။ထိုတစ်ရက်နှစ် ရက်က ရခိုင်ကို ဖုန်းဆက်ရေခါ ဘုရားရီချိုးဖို.လားဖို.ပျင်နိန် ကတ်တေလတ်။ ယင့်ချင့်ကို ကြားစွာနန်. ငါမျက်လုံးတိမှာ မျက်ရည်တိ စွတ်လာရေ။ ငါကကောင်း ငိုချင်လားရေ။ ဖုံးကိုဆက်ပြီးကေပြောဖို. ငါမှာအင်အားမဟိခ။ ငါကကောင်းငိုချင်လားရေ။အသိုက်နန်.၀ီးနိန်ရေငါ။ ဇာခါ ဇာဘ၀မှာ ငါ ရခိုင်သင်္ကြန်ကို ငါတစ်ခါ ပြန်တွိရဖို.လဲ။ ဘုရားရီချိုလို.ပြန်လာကေ ဇာဖြစ်ဖို.လေ့ငါသိရေ။ သိရေအတိုင်းဗျာယ် ငါရို.တိ ရွာထိပ်ဝ က ရီဗုံးတိနန်.အဆင်းသင့်၊ အဘုချေတိဆိုကေ ရီဇစ်တိနန်. တဗျင်းကြိုးဖို. အသင့်။ ယင်းပိုင်း အားရဘားရ ကိုင်းဘလိုက်ချင်ရေ။ ဒေချင့်ငါစိတ်ကူးတိရာ။ ထိုတစ်ရက်နိန်.က မြန်မာတိလုပ်စွာသင်္ကြန်ပွဲကိုငါလားခီရေ။တေးခြင်းလေ့ တစ်ပုဒ်တက်ဆိုပခသိမ့်ယင့်။ယကေလေ့ ငါမပျော် ခြောက်တိခြောက်သတ်နန်. ငါဇာပိုင်မသိတွိရေ။ ငပိမပါ ဆားမပါပိုင်။ မြန်မာစကား မြန်မာတေးခြင်း တိ ငါးနားကို နှိပ်စက်ကတ်ကေ။ ငါ ရခိုင်သားတိနန်. ရခိုင်သင်္ကြန်တေး ခြင်းအားရဘရ ဆိုပြီးကေ ကွဲပါကောင်က ပိုက်ချင်ရေ။ ငါရို.ရွာက လူတိဆိုကေ ကကောင်းပျော်ကြီးကျတိ။ အချေကအစ ၀ါကြီးမ ၀ါကြီးတိအဆုံး သင်္ကြန်ကျရာယာဆိုကေ သုံးဆယ့်တစ်ဖုံ။ ငါဘကြီးတစ်ယောက်ဆိုကေ သင်္ကြန်ကျယာဆိုကေ အရာလူတိဘားမှာရီအလောင်းခံကေလေ့ ကိုယ့်မယားဘားမှာဆိုကေ လုံးဝအလောင်းမခံ။ ထိုတစ်နှစ်သင်္ကြန်ခါ ငရို.အကြီးသျှင် လင်သယ်ကို ရီးလောင်းချင်လို. ဖလားကိုင်ဘနာ ရွင့်ဘနာ လိုက်ယူလခစွာ ရွာအပြင်က ၂ မိုင် ၃ မိုင်ကျမှ နွားရုံ နားမှာ မှီခီရေဆိုဝါ။ယကေ လင်သယ်ကို ရီလေ့လောင်း နချီးတိနန်. လေ့ ကျိုင်ဘခရေလတ်။ယင်ပိုင်အမျိုးမျိုး။ တစ်ချို.ကလေချေတိဆိုကေ သင်္ကြန် ကျယာဆိုဘနာ အင်္ကျီကကောင်းစစက်တိကို လက်မောင်းတိကနိန်ပိုင်ပလိုက်ကတ်လို. အိမ်က အမိသယ် ရို. ငိုရဖို. ရာယ်ရဖို.ပိုင်။ သူရို. သင်္ကြန် mood တိကလေ့ တစ်မျိုးတဖုံ။ ၀ါကြီးမတိအဖွဲ. တိကိုလေ့ကြည့်တစ်ချက်။ အသက်က ၆၀၊၇၀ ။ သင်္ကြန်ကျယာဆိုကေ ချော့ပန် တိ အတို.ချေတိဝတ်လို.။ မျက်နှာခွက်တိမှာ မိတ်ကပ်အမျိုးတစ်ရာ။ရွာက ၀ါကြီးတိ အီးလို.နိန်ဖို.မရ။ ၀ါကြီးတိနိန်ရေ အိမ်တိုင်းကိုလားဘနာစီ ရီလောင်းကတ်တေ။ ရွာလယ်က သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်.မှာလေ့ ကျကျိုပ်တိုးလို.စည်ရေ။ ရွာက အလှပချေ ကလိန်.မေချေ တိဆိုကေ ရီလောင်းခံရစွာ လက်ခတ်မကျ။ တချို.ဆိုကေ မဖျားရအောင် ပါရာဆူတာမောက် ဆလုံးဆောင်ထားရရေလတ်။မဏ္ဍပ်ရှိမှာလေ့ ကကတ်စွာ ဘိတ်တိအိုင်တက်ပါရေ။ လှကတ်စွာ အိုင်စိမ်နိန်ရေ ကျွဲတိကိုကြည်.။ယပိုင် မြွတ်ကတ်စွာ။ တချို.ကလေချေတိဆိုကေ နတ်ကြီးတိ။ သင်္ကြန်ကျယာဆိုကေ အိမ်တိုင်းပတ်စိ ၀င်ဘနာ သံကျပ်ထိုးကတ်ဖို. ဆုမချကေ သံချပ်ထိုးလို.မပြီးယာ။ ဖဲ့သာ ပီးလိုက်မှ ရွင့်ကတ်တေ။ယင်းကြားထဲမှာ သံချပ်လေ့ထိုး သမီးကို ရည်းစားစကားပြောဖို.ချောင်းနိန်စွာကောင် တိ လေ့မကန်။ ယပိုင်ညုက်တေ။ အပျော်ကြီးလို. ရွာမြောက်ဘက်က သောက်ရီကန်ထဲခုန်ချစွ လူပျိုချေတိလေ့ ဟိသိမ့်ရေ။ယကေ ၀ါကြီးတိဘက်မှာ တတုတ်အဆဲခံ။
သင်္ကြန်ပြီးလားကေလေ့ ထမင်းပေါင်းချက်စား၊ ရွာကလူကြီး သူမတိကို ကန်တော့ ၊ ဘုန်ကြီးကျောင်းကိုဆွမ်ပို. ယပိုင်ချစ်ဖို.ကောင်းရေ ရခိုင်ရိုးရာ တောဓလေ့ သဘာဝတိဟိရေ။ အော်သင်္ကြန် သင်္ကြန် ပြောကေကျီဖို.မဟုတ်။ ဒေတန်းခူးလ ရောက်ယာဆိုကေ ငရို.ရွာလယ်က စံပယ်ပင် မှာ သင်္ကြန်ပွင့်တိ ပွင့်လို.ဟိလီဖို.။ ပိတောက် ရနံ.တိ ကြိုင်လို.ဟိလီဖို.။ ရခိုင်သင်္ကြန် နန်. ပိတောက်ကိုချစ်တေငါ ဇာခါဘင်လေ့ အားရဘရ ဆုံတွိကတ်ရဖို.လေ့ဂု။ အော် သင်္ကြန် သင်္ကြန် ..................။
Posted by KingMarayu at 15:582comments
ပြိုင်လောင်းဟုပြောလျှင် ငရို.ရခိုင်သားတိ ရီကိုပြီးမြင်ကတ်လိမ့်မည်။ အဂုအကျွန် ရွီးမည်.ပြိုင်လောင်းအကြောင်းသည် ရီတွင်ပြိုင်ခြင်းမဟုတ်၊ ကုန်ထက်တွင် ထထူးဆဆန်း ပြိုင်ခြင်း
ဖြစ်ပါသည်။ အကျွန်ဘ၀တသက်တွင် တစ်ခါရာ မြင်ဖူးပါသည်။ အကျွန်အသက် ၁၂ အရွယ်ခန်. ဖြစ်သည်။ ပေါက်တောတွင် လည်ရိုးတော်ဓာတ် ဇေတီ ပွဲကျင့်ပသည်။ထိုဘုရားပွဲကို
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင့်ပ၍စည်လေ့ကကောင်းစည်ပါသည်။လူပေါင်းထောင်သောင်းများစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲကတ်ပါသည်။ ထိုပွဲတွင် ရခိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဖုံးဖုံး၊ အက၊ အားကစား၊ ခရမ်းသီး
ဇာတ် ယင်းပိုင်အစုံပါသည်။ အကျွန်ယင်းပြိုင်လောင်းအကြာင်း အသက် ၁၂ အရွယ်ခန်. ဖြစ်၍ လုံးစိပတ်စိ မမှတ်မိပါ။ယကေလေ့မှတ်မိသလောက်တင်ပြလားပါမည်။ ယင်းကုန်းပြိုင်လောင်း
ကို ပုံဖော်ရာတွင် ပုတ်အဆိုး၊ ဖျာ(၀ါ) ရိုင်လိပ်အဆိုးတိကို လောင်းပုံပိုင် ဓားနန်.ပိုင်းဖြတ်ပုံဖော်ရသည်။ အားကောင်းမောင်းသန်၊ ဖျတ်လတ်သော လှေလော်သားတိ ဘေးတဖတ် တချက်
တွင် ထိုပုံဖော်ထားသော ပုတ်အဆိုး၊ ဖျာ(၀ါ) ရိုင်လိပ်အဆိုးတကို ၀ါး(၀ါ) အသား(သစ်သား) ဒဂုံတိနှင့် ပူးချိုင်ရသည်။ ဒဂုံကွင်များမှာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အကွာအ၀ီး ၁ ပေ ၇ လက်မလောက်
အကွာတွင်ဟိသည်။ လောင်းလျော်သားများ သည် ဒဂုံကွင်းတိ အလယ်တွင် ရပ်လျှက် အနိန်ထားဟိပြီး ကုန်းပြိုင်လောင်းအား ခိုင်မာရေကြိုးတိနှင့်ပက်ခုံးတွင် ထမ်းထားရပါသည်။
လောင်းတစ်လောင်းတွင်ဦးရေ ၁၅ ယေက် မှ ၁၇ ယောက်ထိပါဝင်မည်ဟုထင်ပါသည်။ အ၀ီးကကြည့်မည်ဆိုပါ အလွန်လှပခန်.ငြားသော ကုန်းပြိုင်လောင်းကြီးကိုမြင်နိုင်ပါသည်။ ပြိုင်လောင်း
၏ အပြင်ဘက်နံတိကိုလည်းပန်းချီတိနှင့်အလှဖော်ထားပါသည်။လောင်းလှောင်းသားများအနိန်ထားမှာ ရီ ပြိုင်လောင်းပိုင် တတူတူဖြစ်သည်။ လောင်းလှော်သားများ သူရို.၏ လှော်တက်တိကို
အားမှန်အပြည့်ဖြင့်ကိုင်ထားကတ်သည်။ ပြိူင်ပွဲဝင် အသင်းများသည် တာမထွက်မှီ တစင်းနှင့်တစင်းပြိုင်တူရပ်လျှက် ဒိုင်လူကြီး အချက်ပီး ပလီသံကို စောင့်ကတ်ရသည်။ရီပြိုင်လောင်းနှင့်စည်ကမ်းတိ
တတူဖြစ်ပါသည်။ ပလီအချက်ပီးသံကြားလျှင်ကြားချင်း ပန်းတိုင်ကိုအယင်ဆုံးရောက်ရန် တက်တိကိုလှော်လျက် ပြိုင်တူ ပြီးကတ်ရပါသည်။ ဒေပြိုင်ပွဲကြည့်ရသည်မှာ ရယ်ဖို.၊ပျော်ဖို.ကောင်း
ရေပိုင် အားပါဖို.လည်းကကောင်း ကောင်းပါသည်။ ကုန်းပြိုင်လောင်းသည် ရီပြိုင်လောင်းထက် အဆတစ်ရာလောက် ခက်ခဲ့ သိမ်မွေ.မည်ဟုအကျွန်ထင်ပါသည်။ ကုန်းပြိုင် လောင်းတွင်
အတိုင်ဖောက် ကကောင်းညီရန်လိုအပ်ပြီး၊ လောင်းလှော်သားအချင်းချင်း အဟုန်တတူ ပြီးရန်ကကောင်းအရေးကြီးပါသည်။ မဟုတ်ပါက တစင်းလုံး ဂဂြမ်းပြို လဲကျမည်ဖြစ်သည်။
ပန်းတိုင်သို. စဗြီး( ပြီး) ရာတွင် လှော်တက်တိကိုလည်း တပါတည်းလှော်ရပါသည်။ ယင့်ချင့်သည် balance ဖြစ်ဖို.တွက်ကကောင်းခက်ခဲ့သောအလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ အကျွန် ရွီ.(ရှိ) မှာပင်
တချို.သော လောင်းများ ဂဂြမ်းပြို လဲကျကတ်ပါသည်။အကျွန်သည် အချေ ဘာသာ ဘာဝ အလျောက် အအူပိန်အောင်ရယ်မိပါသည်။ အသင်း သသင်းနှင့် သသင်းလည်း မနာ နာအောင်း
သံကျပ်တိ ထိုးကတ်ပါသည်။ ရခိုင်ရိုးရာကုန်ပြိုင်းလောင်းပြိုင်ပွဲ မျိုး သည် ကမ္ဘာ့ မည်သည်.နိန်ရာ မှာ တွိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ပြည်တွင်လည်းပျောက် ကွယ်လားယာဟုထင်ပါသည်။
ယင်းပိုင် ချစ်ဖို.ကောင်းရ ၊သိမ်မွေ.နက်နဲသော ရခိုင်ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုအမွီနှစ်များအား ထိမ်းသိမ်းဖော်ထုတ်ကတ်ပါရန် ရခိုင်တမျိုးသားလုံးကြိုးပမ်းကတ်စီချင်ပါသသည်။
(ရခိုင် ကုန်းပြိုင်လောင်းပွဲအကြောင်းသည် ဒေစာတိုချေ တပိုဒ်ဖြင့် မလုံလောက်နိုင်ပါ။ အကျွန်မှတ်မိသလောက်တင်ပြခြင်ဖြစ်ပါသည်။ သိရေလူဆက်ရွီးကတ်စီချင်ပါသည်။)
Posted by KingMarayu at 14:060comments
မမှတ်သိမ့်ရေ ... နင်................။
Posted by KingMarayu at 10:470comments
အေအမ်ပီ ကြောင့်ရခိုင့်စာပီ အညွန်.ချေ တညွန်. စထွက်လာရရေ ဆိုကေ တယောက်လေ့ငြင်းဖို.မထင်ပါ။ ယေကေလေ့ ရခိုင်စာ၊ ရခိုင် စာပီဆိုစွာ ဇာလေး ဟုမိန်းလာစရာ ဟိပါသည်။ ဒေ မိန်းခွန်း ကို သမိုင်းအထောက်နန်.တောင် ဖြေစရာ မလိုပါ။ ရခိုင်သားက ရခိုင်စာကို ရခိုင်စကား ဖြင့်ရွီးသားခြင်းကိုရခိုင်စာဟုခေါ်ပါသည်ဟုနလဗိန်းတုံးအဖြေပီးလိုက်ကေပင်လုံလောက်ပါသည်။ဤနိန်ရာတွင်ရခိုင်သားက ရခိုင်စာကို ရခိုင်စကား ဖြင့် ရွီးသားခြင်း ဟုဆိုခြင်းမှာ ရခိုင်တပြည်လုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်တပြည်လုံးဟုဆိုသည်မှာ မိမိဒေသ အလိုက်ပြောသော စကားဖြင်. ရွီးသားကတ်ရန်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။အေအမ်ပီ တွင် တချို.ရခိုင်သားများ သည် ရခိုင်စာရာ ရွီးရမည်ဟု ဥပဒေ မရှိကြောင့် စောဒက တက်ကတ်ပါသည်။ ယပိုင်ဆိုကေ အကျွန် မီးခွန်းတစ်ခုမီးချင်ပါသည်။ စစ်တွေမြို့ လမ်းမကြီးမှာ ဖင်ပပြောင်နန်.လမ်းမလျှေက်ရဟုဥပဒေဟိပါသလား။ ငပလီကမ်းခြီ သဲဖြူထက်မှာ တဒုံးဖလင် မအိပ်ရ ဟု
ဥပဒေဟိပါသလား။မဟိပါ၊ ဥပဒေ ထုတ်စရာက လိုပါလာ၊ မလိုဟုရိုးသားစွာ ထင်မိပါသည်။ ဥပဒေ ထုတ်မှလိုက်နာဖို.ဟုဆိုသော အတွေးအခေါ် သည်အလုပ်မဖြစ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု အကျွန်ယုံကြည်ပါသည်။ အရာပြောစရာ တစ်ခုကျန်ပါသည်။ ငရို.အသျှေခါကပင် မြန်မာစာသင်လာစွာ အဂုမ ရခိုင်စာကိုဓားမြတိုက်တိုက်လို.ရွီခိုင်းနီရေဂါ ဟုဆင်ခြီပီးခြင်းဖြစ်သည်။ဒေချင့်သည် နားလည်ပီးလို. ရသော excuse ဖြစ်ပါသည်။ယေကေလေ့ ဒေဆင်ခြီကိုလေ့လာဆန်းစစ် ကြည့်မည် ဆိုပါက ဆင်ခြီပီးသူတွင် မိမိစာကို အထင်သေးသော၊မိမိစကားကိုနှိပ်ချသော၊မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိသော စသော elements တိနှင့် ရခိုင်အသိုင်းအ၀ိုင်း အပေါ်ိုအလွန်တရာမှ Self Esteemနှိမ်ကျနိန်သည်ကိုတွိမြင်ရပါမည်။ဒေအေအမ်ပီတွင် မြန်မာစကားနန်.ရွီိးရွီး ရခိုင်စကားနန်.ရွီး အားလုံးနားလည်ပါသည်။ယေကေလေ့မိမိ identity မပျောက်ရအောင်၊ရခိုင်တိန်ိန်ရေနီရာမှာ တစိချေလောက်အားနာဗနာ ရခိုင်စာရာရွီးသင့်ရေမဟုတ်ပါလော။( ရခိုင်စာရာရွီးသင့်ရေဟုဆိုရာတွင်မိမိဒေသ အလိုက်ပြောသော စကားဖြင်. ရွီးသားကတ်ရန်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည် )စစ်တွေမြို့လမ်းမကြီးထက်မှာ နခြင်းကြောင်တောင် ဖင်ပပြောင်နန်.လမ်းမလျှောက်သင်.ပါ။ ဥပဒေမရှိသော်လည်း ငပလီကမ်းခြီ သဲဖြူထက်မှာ နခြင်းကြောင်တောင် တဒုံးဖလင် မအိပ်သင့်ပါ။ အကျွန်၏ နိဒါန်းရှည်လားပါသည်။အဂု အကျွန်၏ ခေါင်းစဉ်အတိုင်းရခိုင်သားတိ တကိုယ်ကောင်းဆန်လာ မဆန်လာလေ့လာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကတ်ပါမည်။ တခြားလူမျိုးတိ ရခိုင်လူမျိုးအပေါ်ထင်မြင်ယူဆထားမူများ မှန်မမှန်ဝေဖန်သုံးသပ်ကတ်ပါမည်။
ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီးပါဟုတိုက်တွန်းခြင်းရေ တကိုယ်ကောင်းဆန်လာ
အကျွန်သည် ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီးပါဟု AMP မန်ဘာများအားတိုက်တွန်းပြောဆိုဖူးပါသည်။ ယပိုင်ပြောဆိုတိုင်း အကျွန်.အား ကကောင်းတကိုယ်ကောင်းဆန်ကြောင်း၊ နိုင်ငံ ကြီးမှာ နိန်ပြီး flexible မဖြစ်ကြောင်း စသော ပုဒ်ထီး၊ပုဒ်မတိ
အမျိုးမျိုး တပ်ကတ်ပါသည်။ဤနိန်ရာတွင်ရခိုင်သားက ရခိုင်စာကို ရခိုင်စကား ဖြင့် ရွီးပါဟုတိုက်တွန်းခြင်း Flexible မဖြစ်လို.ဆိုခြင်းသည်Curative Education နန်. Social Pathology လေ့လာသင်ကြားနိန်သော အကျွန်မှာ လိုင်းပြောင်းရဖို.ပိုင်
ကျနိန်ပါသည်။ မြန်မာပြည်မှာ တလနိန်ပြီး ရခိုင်ပြည်ပြန် လာရေခါ မြန်မာစကားပြောခြင်းသည် Flexible စာလုံးနန်.ဆီနန်.ရီပိုင် တခုလည်းမဆိုင်ပါ။ မြန်မာပြည်တွင်တစ်နှစ်နိန်ပြီး ရွာကိုအလယ်ရောက်လာသော အကျွန်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်ံ
မြန်မာစကား ကြွိ.ပါအောင် ပြောသည်ကို အကျွန်ကြုံဖူးခသည်။ဤနိန်ရာတွင် မသိနားမလည်၍ (၀ါ) မြန်မာ မိူင်းတိုက်ခံထားရသောကြောင့် ပြူမူရေ ဒေပိုင်အပြူအမူတိကို အကျွန်နားလည်ခွင့်လွတ်နိုင်ပါသည်။ ယေကေလေ့ ရခိုင်ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းလို.
သမုတ်ခံရရေ၊ အမျိူးသားရီးအတွက်လုပ်ကတ်တေလူတိကပင် ယင်းပိုင်အပြူအမူတိလုပ်နိန်စွာကို အကျွန်နားမလည်နိုင်အောင် Odd ဖြစ်ရပါသည်။ ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီးပါဟုတိုက်တွန်းခြင်းရေတကိုယ်ကောင်းဆန်ရေ လို.အကျွန်မထင်ပါ။
အကျွန်ရေ ဆယ်တန်းအောင်လို. ဒဂုံသက္ကသိုလ် တက်ရောက်နိန်တုန်းထိ အိမ်ကိုစာထည့်ရေခါ မြန်မာပိုင်ရွီးထည့်ကြောင့်ရိုးသားစွာဝန်ခံပါသည်။ ယင်းအခါက အကျွန်မသိနားမလည်လို.ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်နိန်စဉ်တွင်း ရွက်နုပြန်ချိန်၊ ရခိုင်စာပီခရီး၊ ရခိုင်
အက္ခရာပေါ်ပေါက်လာပုံ နှင့် အသွင်ပြောင်းလာပုံ စသည့် စာအုပ်တိနန်.ထိတွိ.ပြီးရေနောက် အကျွန် ရခိုင် သားတယောက်အနိန်နန်. ရခိုင်တိဘားကို စာရွီးရေခါ မြန်မာပိုင်ရွီးစွာအဆုံးသတ်လားပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ကကောင်းရှက်မိပါသည်။
ယင်းနောက် အကျွန်၏ မိသားစုနန်. သူငယ်ချင်းတိကို အကျွန်ဘားကိုစာထည့်ပါက ရခိုင်စာဖြင့်ရွီးထည့်စီချင်ကြောင့်ယက်ပြတ်တိုက်တွန်းပြောဆိုဖူးပါသည်။ အောင်းမြင်မူတိလည်းရခပါသည်။ ရခိုင်ပိုင်ရွီးထားရေစာတိအကျွန်ဘားကိုရောက်လာရေခါ
ဖတ်ရစွာ အဂွင့်ဂွင့်အားရဘားရကျပါသည်။ဥပဒေမဟိကေလေ့အကျွန် ရခိုင့်ကျင့်ဝတ်တစ်ခုအကျွန်လိုက်နာခပါသည်။
ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီး လို. ရခိုင်ပြည်တိုးတက်ဖိုးလား
ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီး လို. ရခိုင်ပြည်တိုးတက်ဖိုးလား။ အကျွန်ရက်ပြတ်အမိန်းခံရသောမိန်းခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်စကားပြော၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီးလို.ရခိုင်ပြည်လုံးဝလုံးဝမတိုးတက်နိုင်ပါ။ ဒေနိန်ရာတွင်အပြန်အလှန်မီးခွန်တစ်ခုမီးချင်ပါသည်။ မြန်မာ
စကားပြော၊ မြန်မာစာနန်.ရွီးလို.ရခိုင်ပြည်တိုးတက်လာဖို.လား။ မြန်မာစာကိုနှစ်ပေါင်း ၂၂၀ လုံးအသုံးပြူလာသောရခိုင်ပြည်သည်ကမ္ဘာအဆင်းရဲဆုံးတောင်မကသိမ့်လို. မြန်မာ့အဆင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဆုကို ထထိုက်တတန်ဆွတ်ခူးထားပါသည်။
ရခိုင်ပြည်တိုးတက်ဖို.ဆိုကေ ထိရောက်ပြတ်သားသော နိုင်ငံရီးရာမဟာဗျုဟာ၊စီးပွားရီးရာမဟာဗျူဟာ၊ လူမူရီးရာမဟာဗျူဟာ နန်.ရခိုင်တိ ကျွန်စိတ်ပျောက်ဖို.လိုအပ်ပါသည်။ဒေပိုင်ကြီးကျယ်သောဗျူဟာတိကိုအကျွန်ကကောင်းနားမလည်လို.(၀ါ)
အကျွန်.ရွီးချင်ရေခေါင်းစဉ်ကရွင့်ပါမလားချင်လို. အကျွန်မဆွေးနွေးလိုပါ။ယကေလေ့ ရခိုင်တိစနစ်တကျ သွတ်သွင်းခံထားရသော ကျွန်စိတ်ကို ဖယ်ပလိုက်ဖို.၊လွင်.ပလိုက်ဖို.အတွက်ရခိုင်စာပီက တန်းထ(တံတား)အဖြစ်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။
စကားမဟိ။စာပီမဟိရေလူမျိုးကိုကမ္ဘာကမပြောကေ့ ဖွတ်ကတောင် အထင်ကြီးလေးစားမည်မဟုတ်ပါ။အကျိုးဆက်တိအဖြစ် လူမျိုးတမျိုးအနိန်နန်.ရပ်တည်ဖို.ခက်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။ယင်းပိုင်ခက်ခဲ့လာခါ အကျွန်ရို.ပြည်ဖ၀ါးတပြားချေကို ငလိမ်တောင်တိ
လက်သို. ရီစက်ချရ ပါလိမ့်မည်။ဇာစာကိုမဆို အရွီးအသား၊ပြောဆိုကျွမ်းကျင်ပါက ကကောင်း ကောင်းပါသည်။ှ ရခိုင်ဆရာတော်သျှင်ဥတ္တမသည် ဘာသာစုံကျွမ်းလို.အရှတခွင်ခြီဆန်.နိုင်ခသည်။ယေကေလေ့ ဆရာတော်သည် ရခိုင်တိဘားကိုစာရွီးရေခါ ရခိုင်ပိုင်ရွီးလာ၊ မရွီးလာအကျွန်မသိပါ။မရွီးဆိုပါက ရခိုင်ပိုင်ရွီးအောင် အသျှင်အားအကျွန်တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မည်။
ယကေ သံတွဲနန်. ဂွက ရခိုင်သားတိ ကိစ္စဘစောင်ပျင်ဖို.
အကျွန်နိဒါန်းမှာပြောခရေပိုင် ရခိုင်စာရာရွီးသင့်ရေဟုဆိုရာတွင်မိမိဒေသ အလိုက်ပြောသော စကားဖြင်.
ရွီးသားကတ်ရန်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။သံတွဲနန်.ဂွကရခိုင်သားတိမြန်မာတိပိုင်ပြောပါသည်။ဒေချင့်တစ်ယောက်အမှားလေ့သင့်မဟုတ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်တိအကြာကြီးအုပ်ချုပ်ခသော အိုင်ရာလန် နိုင်ငံ( Republic of Ireland) သည် တနိုင်ငံလုံး အိမ်းဂလိန်.(ခ်ျ)( English) စကားပြောပါသည်။ ယေကေလေ့ အဂုနောက်ပိုင်း Irish အစိုးရက မဟာဗျုဟာ တစ်ရပ်ကိုချမှတ်ပြီးကေ Irish ဘာသာစကားနန်.
စာပီကို မူလတန်းကစပြီးသင်ယူခိုင်းနိန်ပါသည်။ အကျွန်သည် သံတွဲနန်. ဂွက ရခိုင်သားတိ ရခိုင်စကားပြောရ မည်၊ ရခိုင်စာနန်.ရွီးရမည်ဟုမဟာဗျူဟာချဖို.တောင်းဆိုနိန်စွာမဟုတ်ပါ။ အကျွန်ရန်ကုန်တွင် အလုပ် လုပ်နိန်ခါက သံတွဲက ရခိုင်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နန်.ခင်မင်ဖူးသည်။ အလွန်တရာ ပွင့်လွင့်ပြီးချစ်ဖို.ကောင်းပါသည်။ သူမြန်မာစကားပြောကေ အကျွန်.ထက် အဆတစ်ရာလောက်ဝဲပါသည်။ အကျွန်.မှာအရီးမတစ်ယောက် ဂွသူဖြစ်ပါသည်။ အရီးမပြောသောစကားသည် မြန်မာစကားနန်.လုံးဝအတိအကျ မတူပါ။ရခိုင်ဝေါဟာရ တိပါဝင် နိန်ပါသည်။ အကျွန်ဆိုလိုချင်သည်မှာ ယင်းပိုင်ကွဲပြားနိန်သော ရခိုင်ဒေသိယ စကားများနန်.ရခိုင်စာကိုရွီးသားကတ်ရန် တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းပိုင်ဆိုကေ ရခိုင်စာပီ သည် တစ်မျိုးတဖုံဆန်းသစ်လာလိမ့်မည်။ ရခိုင်စာပီကို စံတစ်ခု သတ်မှတ်ဖိုးဆိုကေလေ့ သင့်တော်ရေ အလုပ်တစ်ခုဟုမြင်ပါသည်။ယင်းစံကို ရခိုင်သားအားလုံးလိုက်နာကေ အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ယေဒါလေ့သင့် ထိုစံအား ဒေချင့်က မြောက်ပိုင်းသုံး၊ ဒေစွာက တောင်းပိုင်းသုံးစသဖြင့် အဖျက်သဘောဖြင့်မဆာမ ဝေဖန်ရီး လုပ်နိန်ပါက ရခိုင်စာပီ သည် အဆုံးတွင် တွင်းဆုံးကျလားပါလိမ့်မည်။သံတွဲနန်. ဂွက ရခိုင်သားတိကလည်း မြန်မာစကားပိုင်ပြော မြန်မာပိုင်ရွီးရေပိုင် ရခိုင်ပိုင်ပြော ရခိုင်ပိုင်ရွီးဖို.အားထုတ်သင့်ပါသည်။ ပျောက်နိန်သော ရခိုင်စာပီပတ္တမြားအနှစ်အား တူဖော်ရန် ရခိုင်တမျိုးသားလုံး တက်ညီလက်ညီ လက်တွဲကတ်စီချင်ကြောင့်ရိုးသားစွာ အကြံပြုအပ်ပါသညါ။
ရခိုင်သားတိ Flexible မဖြစ်လား ၊ Racist ဖြစ်လာ
ရခိုင်မဟုတ်ရေ လူအဖွဲ.အစည်းတိ( အထူးသဖြင့် မြန်မာ ) က ရခိုင်လူမျိုးများအား Flexible မဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်ကန်း မျိုးချစ်တိဖြစ်ကြောင့် စသဖြင့်ထင်မြင်စွပ်စဲကတ်ပါသည်။ထိုစွပ်စဲချက်၊ ထင်မြင်ချက်တိကိုလေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ဆင်
တစ်ကောင် ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ.မူကို တောဝက်ရိုင်းတစ်ကောင်က မင်းရိုင်းရေ Flexible ဖြစ်ဖို.လိုရေ လို. စာလာချပုံနန်. တူပါသည်။ ရခိုင်ပြည်သည် အဂုမှအမိဝမ်းမှ ပြုတ်ဟုကျလာသောတိုင်ပြည်မဟုတ်ပါ။ သမိုင်းအထောက်အထားတိအရ 2666 B.C.
ကပင် စလာသော ရခိုင်ပြည်၊ရခိုင်လူအဖွဲအစည်း အားယင်းပိုင်ထင်မြင်ချက်လာပီးခြင်းသည် တရားလွန်ပါသည်။ယင်းကဲ့သို.ဆားမရ ရီမရ စွပ်စွဲချက်တိကို စွပ်စွဲသူရို.ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါသည်။အကျွန်ရရိုးသသားပြောရကေ ရခိုင်လူမျိုးပိုင်
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေးသော၊ ဖော်ရွေသော။Flexible ဖြစ်သော၊စိတ်ရင်း၊စေတနာကောင်းသော လူမျုိုး အကျွန်မတွိဖူးပါ။အကျွန်သည် ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာရောက်ဖူး၍ လူမျိုးပေါင်းများစွာနန်. နိန်ဖူးပါသည်။သမိုင်းကိုကြည့်ဖို.လား ကြည်.ကတ်ပါ။
Posted by KingMarayu at 21:500comments
အဆက်၁၀၀၀ ငယ်ရေ
လကြောင်း ထောင်း ဂျောင်း ဒေ.............
Posted by KingMarayu at 20:250comments
ငါ့ကို လုပ်ချင်ပိုင် လုပ်ကတ်
ငါ ရှင်းမပြ ချင်.........
ပြစရာ လဲ့ န တ္ထိ....................။
၀မ်းတွင်း ဆုံးတော့ခါ မဟုတ်
ငါ ဂေါင်းထက်ေ၇ာက်လီ ဖို.
ငါ သွားကြားေ၇ာက်လီဖို..................။
Posted by KingMarayu at 20:220comments
သမ္မတ ရာဇာ အဆုံး...................။
ရခိုင် စည်ကြီး ဗြိ်န်းစောင်တီးလို.
ငါ ဆို.နစ် ကြွီကွဲ လို.
ပေါက် နိန်ရေ အမင်္ဂလာ
ရခိုင် စည်သံ နန်.
ကျွန် ရချိန် မြင့်ပါလတ်တေ
Posted by KingMarayu at 20:140comments
အသူနန်. စားဖို.လဲ့ .................။
အသူ.နန်. အိပ်ဖို. လဲ့ ............။
အသူ. နမ်း ဖို. လဲ့ .................။
အသူ.နန်. နိန် ဖို. လဲ့ .................။
ရက္ခတိုင်းကိုရာ ချပီးပါ ...............။
(ရခိုင်စုံတွဲများ အိပ်ရာဝင်ခါ နီးဒေကဗျာကိုဖတ်ပြီး ကစပ်နိုင်ပါသည်။)
Posted by KingMarayu at 20:120comments
မိုးရွာ ရေ ပိုင် မျက်ရည်....
ရမ်းပေါက်လီ လောက် ပြင်းရေ....
တပေါင်းလ မှာ အရွက်တိကြွီစွာ....
အသဲ အဖွဲရာ..... အဘာ...
အဘာ ကို လွမ်းစွာ တိကို.....
အသူက လာလို့ နှစ်သိမ့်ဖို့လဲ...???
သက္ကရာဇ် တိ အရှုပ်အထွီး.....
စက္ကန့် အပြောင်း အလဲ....
မာယာ များရေ နိန့် ရက်တိနန့်.....
ထွက်ပြီးလား ရေ မနားယေ.....
အဘာ..ကို ချစ်စွာ အချစ်တိ.....
"ဒေ ကဗျာကို ၁၃.၁၀.၂၀၀၈ ရက်နိန့် ဂျာမဏီ ကိုလားခါ လေယာဉ်ထက်မှာ ရွီးစပ်ပါရေ....။"
Posted by KingMarayu at 20:100comments